रामकुमारी झाक्रीलाई प्रश्न- मन्त्री भएपछि के काम गर्नुभयो? (भिडिओ) :: सन्जिब बगाले :: Setopati
रामकुमारी झाक्रीलाई प्रश्न- मन्त्री भएपछि के काम गर्नुभयो? (भिडिओ)
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले आफूले सहरलाई चलायमान बनाउनेदेखि सीमान्तकृतका लागि बस्ती बनाउने सम्मका योजनामा ध्यान दिएको बताएकी छन्।
'काठमाडौंजस्ता क्रोनिक सहरहरूलाई आर्थिक रूपमा धेरै गतिविधि हुने सहर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही अवधारणा छन्। महानगर २४ सै घन्टा जागा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो,' उनले भनिन्, 'त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्‍यो र सर्वसाधरणपनि सहभागी हुनुपर्‍यो भन्ने हो। यसका लागि सुरक्षाको कुरा पनि जोडिएर आउँछ।'
'संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक छ। यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ। हामीले राउटेका लागि आवास निर्माणको काम अघि बढाउँछौ। मुसहर, डोम र चमारको पक्षमा पनि काम गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्,'वादी जातिको आवासको लागि काम गर्ने प्रयास भएको छ। काठमाडौंका पोडे, च्यामे, कुसुली र धोबीजस्ता सीमान्तकृतका लागि काम गर्नको लागि योजना बनाउँदैछौं।'
- बन विभाग परिसरमा सबै सरकारी कार्यालयको एउटा हब बनाउने तयारी छ। अहिले मन्त्री निवास र कृषि विभागलाई ओपन स्पेस बनाउने र त्यहाँ रहेका ती विभागलाई बन विभाग परिसरमा ल्याउने योजना छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३०, २०७८, १४:५०:००